Tato Anatin’ny Roa Volana, Tsy Afaka Niditra Aterineto Ireo Kamerone Mpiteny Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2017 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Español, 한국어, Français
Voasivana ny aterineto ho an'ireo Kamerone mpiteny anglisy – sehatra ho an'ny daholobe.
Raha vao miatrika tsy hafaliana mihanaka be eny anivon'ny vahoakany ny governemanta iray, ny hetsika voalohany ataony amin'izao androntsika izao dia ny mibahana ny tambajotra sosialy. Ao Afrika, marobe ireo firenena mampihatra azy io, na noho ny tahotra hisian'ny herisetra mandritry ny fifidianana, na noho ny hetsika sendikaly, mpianatra, na noho ny tahotra tsy hisian'ny fitoniana politika vokatry ny tsy fahaizana mitantana.
Ao Kamerona, mangotrangotraka noho ny antony maro isankarazany ankehitriny ireo faritra miteny anglisy. Ao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny tranonkala courrierdesafriques.net i Bounya Lottin no manazava ireo fihetsehampo sy hasosorana manosika ireo mpisolovava hidina an-dàlambe mba hampiseho fa feno ny kapoakan'izy ireo, ny 11 octobre 2016:
Anatin'ireo olana marobe mahatezitra ireo mpiray tanindrazana mampiasa ny teny anglisy, mitàna ny laharana voalohany ny momba ny resaka «Common Law» ampitahaina amin'ny «Droit civil». Ilay voalohany dia ampiasaina any amin'ireo miteny anglisy, raha fitaovana ampiasain'ireo mpisolovava miteny frantsay kosa ilay faharoa. Ny tsy fitoviana misy eo amin'ireo lalàna roa ireo no nitondra ho aminà fahasarotana maro saro-bahàna. Any amin'ny faritra miteny anglisy, amin'ny anaran'ny “Common Law” nolovaina tamin'ireo britanika mpanjanaka, dia afaka maka ny toeran'ny “mpitsara” ny mpisolovava, na mpiraki-draharaha, na vadintany eny amin'ny fitsaràna. Any amin'ny faritra miteny anglisy ao amin'ny firenena, nanefy betsaka ny fomba fanao namolavolana ireo olon'ny lalàna io zavamisy io. Tsy maintsy miteraka olana izany rehefa te-hanery hametraka fenitra ny fitondràna izay ireo miteny frantsay no mihìbahan-toerana ao anatiny, mba hanavahana ny Mpiraki-draharaha sy ny Vadintany eny amin'ny fitsaràna sy ireo mpisolovava any amin'ny ilany miteny anglisy.
Kanefa, tantara lavabe manana ny fiandohany avy amin'ireo fiheverana ho fanilihana miandàlana ny faritra Avaratra-Andrefana sy ny Atsimo-Andrefana izay samy miteny anglisy io, izay manome ny 20% amin'ireo mponina 22,5 tapitrisa monina ao Kamerona.
Araka ireo mpahay lalàna, dia ireo mpampianatra, ny mpianatra ary ireo sendika no nidina an-dàlambe hitaraina noho ny tsy fanànan'ny teny anglisy toerana mitovy amin'ny teny frantsay ao anatin'ny rafi-panabeazana, ny fitantanan-draharaha ary ny fisoloana tena any anaty sampan-draharaha. Tsy niandry ela ny fifandonana nahafatesana olona nifanaovan'ny polisy sy ireo fisamborana mpanao hetsi-panoherana, nahatratra ny fetra fara-tampony tamin'ny 8 Desambra 2016 teny amin'ìreo arabe tao Bamenda renivohitry ny faritra Avaratra-Andrefana, maro no maty sy naratra mafy.
Hatramin'ny tapaky ny volana Janoary 2017, tsy afaka idirana ny aterineto any amin'ireo faritra miteny anglisy. Misy fiantraikany ratsy be amin'ny seha-pihariana rehetra ny fahatapahan'ny aterineto.
Sorabaventy fanentanana momba ny fahatapahan'ny aterineto ao Kamerona – sehatra ho an'ny daholobe.
Ny tranonkala accessnow.org, izay ivondronan'ireo fikambanana marobe mpiaro ny zo niomerikan'ireo mpampiasa manerana ny tany dia namoaka taratasy iray misokatra ho an'ireo Talen'Orinasam-pifandraisandavitra eo amin'ny tsena kamerone, voasonian'ireo fikambanana 20 mahery avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sivily kamerone, ny tanibe afrikana mihitsy sy avy any ivelany, izay ampahatsiahivan-dry zareo hoe:
Amin'ny fibahanana tsy ho afaka miditra amin'ny fahazoana vaovao sy tolotra, ny fanelingelenana ny fifandraisana dia manakana ny fampiharana ny zo maha-olona, indrindra ny fahalalahana maneho hevitra sy hanana fikambanana, ary mampihisatra ny fivoarana ara-toekarena, amin'ny famelezana mafy ireo orinasa mitondra famoronana nefa miankina amin'ny tolona omenareo. Tombananay ho efa 1,39 tapitisa dolara no fatiantoka nateraky ny fanapahana aterineto, tarehimarika iray izay tsy mitsahatra ny mitombo isanandro. Io tombana io dia tsy mandray ho anatin'ny kajy ireo dona mandritry ny fotoana maharitra aterak'io tsy fisian'ny fifandraisana io, toy ny fikorontanan'ny asa famokarana mifampitohitohy, na koa ireo fandefasana vola be avy any amin'ireo kamerone am-pielezana.
Tamin'ny fifotorany tamin'ny tatitry ny ONG “Internet sans frontières” (aterineto tsy voafetran-tsisintany) momba ny toedraharaha ao Kamerona, mamoaka ny ticmag.net , sehatra filazana vaovao momba ny TIC sy ny Fifandraisandavitra ao Afrika, hoe :
Aoka ho marihantsika fa mba hiatrehana io toedraharaha io, betsaka ireo tsimok'orinasa no voatery nifindra toerana mba honina any amin'ireo tanàndehibe mpifanolo-bodirindrina manana fifandraisana aterineto. Izany no antony nahatonga ireo tanora maro mpamorona orinasa tao Buea lasa any Douala, ary ireo tao Bamenda lasa any Bafoussam.
Hatramin'izay, ny fanentanana teny anivon'ny tambajotra sosialy dia tsy kivy manao izay hiverenan'ny aterineto. Nisy mihitsy aza fandefasana ny tenifototra iray, #Bringbackourinternet (#Averenonyaterinetonay). Hatreto aloha, tsy mbola nahitàna vokatra.
Kanefa, efa tamin'ny 2012, i Alexandre Salque no nanaitra tao amin'ny 01net.com, iray amin'ireo tranonkala be mpitsidika indrindra ao Frantsa, miresaka manokana momba ny teknolojian'ny fampitambaovao, hoe neken'ny Firenena Mikambana, izay mpikambaba ao anatiny i Kamerona, ho toy ny zo fototra maha-olona ny fahafahana miditra amin'ny aterineto.
Zavamisy ara-tantara. Sambany, neken'ny ONU ny maha-zo fototra ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, mitovy laharana amin'ireo zo hafa maha-olona. Niaraka nanasonia tsy nisy nitsipaka ilay fifanarahana ireo mpikambana 47 ao amin'ny filankevitra momba ny zon'olombelona, fifanarahana mametraka fa ny olona tsirairay dia manana zo hiditra sy haneho hevitra malalaka eo amin'ny aterineto.
Taty aoriana, ny Jolay 2016, rehefa nandray ny fidirana amin'ny aterineto ho iray amin'ireo zo fototra ny Filankevitra momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, dia nandany fanapahana iray momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny aterineto, tamin'ny fanamelohana :
tamin'ny feo niraisany ireo fepetra izay iniana atao ikendrena ny hanakanana sy hanelingelenana ny fahazoana miditra na ny fanapariahana vaovao ety anaty aterineto, manitsakitsaka ireo Zo maha-olona voaaro eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ary miantso ireo firenena rehetra mba hampiato ny fampiasàna izany fomba fanao izany.”
Nanasa ny firenena rehetra ihany koa io anatranatra io mba hiantoka ny fahafahana maneho hevitra an-kalalahana, mifanaraka amin'ireo adidy sy andraikitra iraisampirenena ananan'izy ireo:
hiatrika ireo ahiahy momba ny resaka filaminana mifanaraka amin'ny andraikitra iraisampirenena ananan'izy ireo mifandray amin'ny resaka zon'Olombelona mba hahafahana miantoka ny fiarovana ny fahafahana maneho hevitra an-kalalahana, ny zo hanana fikambanana, ny zo hanana ny fiainany manokana ary ireo zo hafa maha-olona ety anaty aterineto, amin'ny alàlan'ireo andrim-panjakana nasionaly demaokratika sy mangarahara misy ao aminy, mijoro amin'ireo fotokevitra araka ny lalàna, amin'izay fomba afaka iantohana ny fahalalahana sy ny fiarovana ety anaty aterineto mba hijanonana ho hery iray mavitrika miteraka fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy ary kolontsaina ;
Indrisy anefa,ny governemanta kamerone, raha tokony hanatanteraka ireo andraikitra aterak'ilay fanaovana sonia ny fifanarahana iraisampirenena, dia mamely ireo fitaovana hafa fampiharana ny fahalalahana maneho hevitra. Tahaka izany, ny 20 Janoary 2017, nandefa fandrahonana ny Filankevi-pirenena misahana ny Fifandraisana (CNC) ao Kamerona fa ho hakatona ireo trano maro mpampahalala vaovao ao an-toerana.